Muqdisho: Maxkamad Xukun Ku Riday Askar Rasaas Ku Furtay Gaari Bajaaj - Horseed Media • Somali News
Muqdisho: Maxkamad Xukun Ku Riday Askar Rasaas Ku Furtay Gaari Bajaaj
December 7, 2019 - By: Omar Mohamed - Leave a Comment
Labo askari oo ka tirsan ciidamadda Booliiska Muqdisho ayaa la horgeeyay Maxkamada ciidamada iyadoo loo heystaa in ay si bareer ah ugu fureen rasaas laba gabdhood oo wada saarnaa Bajaaj mareysay bar kontorool oo ay ku qornaayeen 07-da bishii sagaalaad ee Sanadkan.
Labadan askari oo lagu kala magacaabo Xasan Muuse Warsame iyo Xasan Xuseen Maxamed ayaa ka wada tirsanaa ciidamada Boliiska, waxaana isla xilligii ay geysteen dilka Marxuumada Istar Axmed Cabdulle iyo Dhaawaca Dhibane Faadumo Axmed Cabdulle oo ahaa walaalo marayay agagaarka Isbitaalka Masaarida ee degmada Hodan.
Labada Eedaysane oo ka jawaabayay eedda loo heysto ee ah dilka iyo dhaawaca ay u geysteen gabdho walaalo ah ayaa Maxkamadda u sheegay in ay si wada jir ah xabada u rideen iyagoo oo kaga dan leh in ay ku kala fududeeyaan Jaamka ka jiray Isgoyska Maseerida ee degmada Hodan.
Madaxweynaha Jubaland oo booqday Dekedda Magaalada Boosaaso.
Musharaxiinta Gal-mudug oo codsaday in dib loo dhigo doorashada Madaxweynaha Galmudug
Bayle iyo Filish oo kala saxiixday heshiis ku kacaya 112 Milyan
Deni: Dastuurka Federaalka Ayaa Ogol in Labo Maamul Iskaashi Samaystaan -DAAWO